Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọnụ ọdụ ụgbọ elu kacha ibu na Tibet na -amalite ọrụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ga -enyere ọdụ ụgbọ elu aka iru ebumnuche nke ijikwa ndị njem nde 9 na tọn 80,000 nke ibu na ozi site na 2025, dị ka ọdụ ụgbọ elu si kwuo.
Kemgbe ngwụcha 2012, China na -agbasawanye itinye ego akụrụngwa na Tibet.
Mpaghara ahụ ewepụtala ụzọ ụgbọ elu 130, yana obodo 61 jikọtara ụgbọ elu.
Ọdụ ụgbọ elu Lhasa Gonggar bụ ọdụ ụgbọ elu kachasị na Tibet.
Nnukwu ọdụ ụgbọ elu dị na ndịda ọdịda anyanwụ mpaghara Tibet Autonomous Region malitere ọrụ taa, ka arụchara ya ihe karịrị afọ atọ.
Ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu nke Tibet na -amalite ọrụ
Ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ nke ọdụ ụgbọ elu Lhasa Gonggar dị ka ifuru lotus nke si n'elu. Ọ ga -enyere ọdụ ụgbọ elu aka iru ebumnuche ijikwa ndị njem nde 9 na tọn 80,000 nke ibu na akwụkwọ ozi tupu 2025, dị ka ọdụ ụgbọ elu ahụ si kwuo.
N'ịbụ nke dị na Gonggar County nke Shannan City na nso isi obodo mpaghara Lhasa, ọdụ ụgbọ elu Lhasa Gonggar bụ ọdụ ụgbọ elu kachasị na Tibet.
Kemgbe ngwụcha 2012, China na -agbasawanye itinye ego akụrụngwa na Tibet. Mpaghara ahụ ebuputala ngụkọta ụzọ ụgbọ elu 130, yana obodo 61 jikọtara ụgbọ elu. Ọnụ ọgụgụ njem ndị njem mere n'ọdụ ụgbọ elu ndị a ruru nde 5.18 na 2020.